ဒေါနမြေ: ယူအင်န်အက်ဖ်စီ ခွဲထွက်သွားတဲ့ ကေအင်န်ယူအပေါ် ဆလိုင်းလျန်မှုန်း ဆာခေါင်း ဘယ် လိုမြင်သလဲ
ဒေါနမြေနေ့စဉ်သတင်းဌာနသို့ စာမူများ ပေးပို့လိုပါက ( dawnamyay2013@gmail.com ) သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်
ယူအင်န်အက်ဖ်စီ ခွဲထွက်သွားတဲ့ ကေအင်န်ယူအပေါ် ဆလိုင်းလျန်မှုန်း ဆာခေါင်း ဘယ် လိုမြင်သလဲ
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေစဉ် ကရင့်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းရင်းသားများထဲမှ နိုင်ငံရေးအကျိုး အမြတ်အတွက် သီးသန့်ခွဲထွက်ခြင်း၊ အကျိုးအမြတ်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်နေခြင်း စသည်ဖြင့် KNU အပေါ် ကောလာဟလ ထွက်ရှိခဲ့ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ပေး နိုင်ရန် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ပြီး ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ ဆလိုင်းလျန်မှုန်းဆာခေါင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ KNU ကို ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားရှိ ပါသလဲ။
့ကို လုံးဝမပြစ်မမြင်ပါဘူး။ KNU အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားတယ်၊ အထူးသဖြင့် မူတူးစေးဖိုး တက် လာပြီးတဲ့နောက်မှာ သူက ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တယ်။ လမ်းချပေးတယ်၊ သူက နေပြည်တော်လာတယ်၊ ဆွေးနွေးဖို့သမ္မတနဲ့ တွေ့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သူက လမ်းဖော်ပေးတယ်။ သူဖော်ပေးတဲ့လမ်း ပေါ် မှာ NCCT တို့ ဘာတို့က လိုက်ပြီးသွားတယ်။ သူ သီးခြားလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူပြောနေတာတွေ လုပ်ဆောင်တာတွေ အားလုံးပွင့်လင်းတယ်။
KNU အနေနဲ့ UNFC က ယာယီနုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာရော။
သူတို့နုတ်ထွက်တာ အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တာ မပါဘူး။ UNFC ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းချင်တယ်။ KNU တင်ပြ တာက UNFC အနေနဲ့တပ်ပေါင်းစု ပုံစံမဟုတ်ဘဲ တစ်ပါတီ စနစ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်ဖွဲ့စည်းပုံ မဟုတ်၊ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ထောက်ပြတယ်။ နောက်တစ်ခုက လက်ရှိတိုင်းပြည် အနေအ ထားမှာ စစ်ရေးကို ဦးစားပေးတာထက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပူးတွဲအဖြေရှာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းကို သုံးသင့်တယ်လို့ တင်ပြတယ်။ ဒီအပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အစိုးရနဲ့ဆိုင်တယ် ပြောဆိုမှုက မမှန်ပါဘူး။
UNFC က ထွက်သွားတဲ့ KNU ကို ဝေဖန်ကြတာကိုရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
UNFC ဆွေးနွေးပွဲ နောက်ဆုံးအနေ အထားမှာ မဖြစ်ပေါ်သင့်တာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင် တချို့တ လေရဲ့ လေသံတင်းမာမှုတွေကလည်း မလွှဲသာ မရှောင်သာလို့ ထွက်သွားတာလို့မြင်တယ်။ ကျွန်တော် က တော့ KNU ကို လုံးဝအပြစ် မတင်သင့်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ တိုင်းပြည်က ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို သွားနေတဲ့အပေါ်မှာ ဒီမိုကရက်တစ်လမ်းစဉ်ကို သွားနေတဲ့ အပေါ်မှာ KNU တင် ပြတာနည်းလမ်း ကျပါတယ်။
KNU သွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် မူတွေ အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တော်လှန်ရေး စလုပ်တာက ကရင်တွေပဲ။ ၆၅ နှစ်ကြာပြီ။ဒီတော်လှန်ရေး တစ်ခုလုံးမှာ သူတို့တစ်ခါမှ မမှားဘူး။ အမျိုးသားရေးကို သူတို့ တစ်ခါမှ သစ္စာမဖောက် ဘူး။ ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ လည်း သူတို့ဆောင်ရွက်တယ်။ တပ်ပေါင်းစုပေါ်လာရေးကိုလည်း KNU ပဲ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။
သူတို့က အနေအထားကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ စောဘဦးကြီးပြောတာ ရှိတယ်၊ တော်လှန်ရေးကို နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းသုံးခုက အင်အားနဲ့ အနိုင်ယူတာရယ်၊ အခွင့်အရေးနဲ့ အနိုင်ယူတာရယ်၊ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်း လဲလာတဲ့ အနေအထားက ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့ အနိုင်ယူတာရယ်ပါ။
အခုအခွင့်အလမ်းက ပေါ်လာတယ်၊ အဘက်ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တယ်။ ဒါတွေကို အမိအရ ရ ယူပြီး ကျွန်တော်တို့ သွားသင့်တယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ် မူတူးစေးဖိုးပြောတယ်။ အနေအထား အားလုံးကို သေချာ သုံးသပ်စဉ်းစားပြီး မှတ်ချက်ချတာပါ။ အရမ်းလေးစားတယ်။
၂၀၁၅ အလွန်မှ အပစ်ရပ်ချင်တယ်ဆို တာမျိုးမလုပ်ဖို့ KNU က အခြားတိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေကို ပြော ဆိုတားမြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကကော သုံးသပ်မှု ဘယ်လိုရှိမလဲ။
အခြားအဖွဲ့တွေ အခက်အခဲရှိတယ်။ နာကြည်းချက်တွေ ရှိတယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၆၀ တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီးမှ နာကြည်းချက်၊ နစ်နာချက်တို့ ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြောမယ်ဆို ရှေ့တိုးဖို့ လုံးဝမရှိဘူး။ အနာဂတ်ဆိုတာ မှောင်ပိတ် နေမယ်။ နာကြည်းချက်ကြောင့် အခက်အခဲကြောင့် အစိုးရကို ငြိမ်းချမ်းရေးကို မချဉ်းကပ်ချင်ရင် မရဘူး။ နာကြည်းချက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ လိုတယ်၊ ကျော်လွှားပြီး ကြည့်နိုင်ဖို့ လိုတယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသားတွေ က ငါတို့ ဘယ်လိုခံခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ပြောကြတယ်။ ပြောမယ်ဆို အားလုံး မှာ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလွဲတွေကို အဖြေရှာဖို့မသင့်ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်မူတူးစေးဖိုးက ယနေ့နိုင်ငံရေးကို သုံးသပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နည်းလမ်းက တိုင်းရင်းသား အားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာယူတတ်ဖို့ အများကြီး သင်ပေးပါတယ်။
Posted by daw at 4:08 PM
မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေမှု အင်အားသုံး၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ စစ်ဆေးအရေးယူမည်
22.9.2014 မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲနေမှုများ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာသောကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေမှုများကို အင်အားသုံး၍ တစ်န...
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
18.10.2014 ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ လေးဖွဲ့ ပါဝင်သည့် ကော်သူးလေတပ်မတော် (Kawthoolei Armed Forces – KAF) ဖွဲ့စည်းကြောင်း အောက်တိုဘ...
ကလေး ၁ ဦးအပါအ၀င် မြန်မာအလုပ်သမား ၃ ဦး ထိုင်းတွင် အသတ်ခံရ
26.1. 2015 ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် ချိုက်ပူရီမြို့နယ်မှာ ရာဘာခြံအလုပ်သမား ၃ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံရေ...
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲအတွင်း တွင် ဒေသခံ ၆၀၀ ခန့် ရေဘေးကြုံ
30.7.2013 ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ ဇမိချောင်း ရေလျှံမှုဖြစ်ပေါ်ကာ ပြောင်မထိန်ကျေးရွာအုပ်စု ရှိ ချောင်းဆုံကျေးရ...
6.4.2014 ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ၊ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့် အမှတ်တရအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကျောက်တိုင် ...
နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု မြင့်တက်ရေးအတွက် မြန်မာ-ထိုင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် လမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်သွားမည်
19.8.2014 ရေထွက်ကုန်များကို ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့်တင်ပို့နိုင်ရန် တနင်္သာရီ၊ မောတောင်ဒေသမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် လမ်းမကြီး...
ထိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေ စစ်တပ်က စတင်သတိပေးပြီ
ဘန်ကောက် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ။ ။ ထိုင်း နိုင်ငံ တပ်မတော်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ် ပရာယုသ်ချန်အိုချာ က တိုင်းပြည်အတွင်း အစိုးရ နှင့်ဆန့်ကျင်သူ များ...
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုမြိုင် ကျေးရွာတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ကရင်လက်နက်ကိုင်များပူးပေါင်းစစ်ရေးပြအစီအစဉ် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုများ 27.DEC.2013
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နယ် ရွှေကုက္ကိုမြိုင် ကျေးရွာတွင် ကရင်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ကရင်လက်နက်ကိုင်များပူးပေါင်းစစ်ရေးပြအစီအစဉ် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု...
မွန်ပြည်နယ်မှ လိုင်စင်မဲ့ကား ၁၅၀ လေလံတင်မည်
26.1. 2015 မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် လိုင်စင်မဲ့ကားအစီးရေ (၂၀၀)ကျော်ရှိသည့်အနက် တရားရုံးများမှ စီရင်ချက်ချပြီးသည့် လိုင်စင်...
ပုံမှန်စီးဆင်းနေတဲ့ မဲဆောက် - မြ၀တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး
17.9.2014 ထိုင်း -မြန်မာနယ်စပ်ရဲ့ အဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မြ၀တီမြို့မှာ နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ချိန်ကိုက်မိုင်း နှစ်လ...
တောငျသာ ဘုနျးကွီးကြောငျး ပဋိပက်ခ ၂၇ ဦး အမှုဖှငျ့ထား - မန်တလေးတိုငျး ဒသေကွီး တောငျသာ မွို့နယျ ငွိမျးခမျြး တောရ ဓမ်မရိပျသာ ကြောငျးတိုကျ ပဋိပက်ခ ဖွဈစဉျ အတှငျး ကြေးရှာ ၂ ရှာမှ ၂၇ ဦးကို အမှု ဖှငျ့လှဈထားကွောငျး ...
Karen State Parliament Approve Expansion of Taungalay New Town Project in Hpa An - The proposal to expand the Taungalay new town housing project in Sanpree village tract, Hpa-An Township got the green light from the State Parliament on Ap...
ကော်သူလေး တပ်မတော် တနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းရန် စီစဉ်နေ...
ကေအန်ယူ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး မေးမြန်းချက်
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဖြစ်စဉ် အခြေအနေများ...
ကျိုက်ထီးရိုး တောင်တက် အထမ်းသမား သမဂ္ဂများ လုပ်ပိုင...
ကေအန်ယူက ယူအန်အက်ဖ်စီနှင့် ဆက်လက်တွဲပါ – မန်းအော်လ...
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့်ေ...
ခေါင်းဆောင် သားသမီးတွေ သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်ကြတော့မလာ...
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးရာသီစတင်၍ ရန်ကုန်-ကျိုက်ထို အ...
အစိုးရဝန်ထမ်းနှင့် အရပ်သားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်...
ရနောင်းတွင် တရားမ၀င်ဖုန်းလိုင်းအသုံးပြုမှုဖြင့် မြန...
မြန်မာနှစ်ဦးကို ဗြိတိန်စုံတွဲအား သတ်သည်ဟု စွပ်စွဲ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော လူငယ်နှစ်ဦး၏ မ...
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းအရှိန်ေ...
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် နဘူးလမ်းပိုင်းတွင် ပစ်ခတ်မှုထ...